YEYINTNGE(CANADA): Monday, June 11
ကုလား ရခိုင်အဓိကရုဏ်းမှ ပြည်ပကျူးကျော်စစ်ပွဲဖြင့်
နယ်မြေသစ်ကြိုးစားမှုကို ဆန့် ကျင်ကြ
သာမန်အားဖြင့်ကြည့်လျှင် သွေးရိုးသားရိုးမဟုတ် ၊
တပုံတခေါင်းရှိနေသည်ကို တွေ့ ရသည် ။ လွန်ခဲ့သော ၁၉၅၂-ခုနှစ်က
ကုလားရခိုင်အဓိကရုဏ်းတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ မှုများသည် သူတို့ ၏
အသာစီးရလိုမှုများသာ ရှိနေသောအနေအထားဖြစ်သည် ။ ယခုဖြစ်ပျက်နေသော ပြသနာမှာ
ယင်းသို့ မဟုတ် ။ သမိုင်းလိမ်ဘင်္ဂလီကုလားတို့ မှာ စီမံချက်များစွာနှင့်
ရှိနေခဲ့ သည် ။ ယင်းစီမံချက်များကို တိတိကျကျ
ရယူလိုခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကို အစ္စလမ်မစ်မြန်မာနိုင်ငံ
မူဂျာဟစ်သူပုန် -ကာဆိန်းသူပုန် - အဒူဇေါ်ဖွါး-စသော
ကုလားလက်နက်ကိုင်တို့ သည် စင်စစ်အားဖြင့် -၁၉၇၀-ခုနှစ်အထိ
ယခုပြောနေဆိုနေကြသော သမိုင်းလိမ် ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင် မဖြစ်ခဲ့ ။
ပို၍လူသိသူသိ လုပ်လာချိန်ကား -၁၉၈၈-ခုနှစ် အရေးအခင်းဖြစ်လာသောအခါ
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းအနေဖြင့် လှုပ်ရှားလာခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည် ။
ထိုင်းနယ်စပ်တွင် -DAB - ၌ အဖွဲ့ ဝင်အဖြစ်ဝင်ရန် ကြိုးစားသော်လည်း
မအောင်မြင်ခဲ့ ။ သို့ သော် -ABSDF-က ဒေါက်တာနိုင်အောင်တို့ က
အသိအမှတ်ပြုသော ကြေညာချက်တို့ ကို ထုတ်ပြန်သောအခါ သူတို့ ၏
လှုပ်ရှားမှုများ ခြေလှမ်းကြဲစပြုလာကြသည် ။ ဘ၈င်္လားဒေ့ရ်ှတွင်လည်း သူတို
့က နယ်မြေခံဒေသဖြစ်သော လူမျိုးဖြစ်၍ လှုပ်ရှားရန် စနစ်တကျ
ပြုလုပ်ကြတော့သည် ။ သူတို့ အား ကမ္ဘာသိ ပြုလုပ်ပေးသော သူတို့ မှာ
သမိုင်းလိမ်ဘ၈င်္လီမူဆလင်ကုလားတို့ တင်မဟုတ် ။ ရှမ်းလူမျိုး ဦးဟန်ညောင်ဝေ-
ဗမာလူမျိုး ဒေါက်တာဇါနည် -ရခိုင်လူမျိုး ဒေါက်တာရွှေလူမောင်-ABSDF-ဥက္ကဋ္ဌ
ဒေါက်တာနိုင်အောင် -တို့ မှာ နိုင်ငံရေးလောက၌ တတ်အားသမျှ ကိုယ်ဖိရင်ဖိ
ငွေရရင်ပြီးရော သဘောမျိုးဖြင့် ကူညီထောက်ခံ
သူတို့ လို နိုင်ငံရေးလောက၌ ပါဝင်ကြသူများရှိသလို
မီဒီယာအသံလွှင့်ဋ္ဌါနက -RFA-မှ ဦးခင်မောင်စိုး- VOA-မှ
ဦးသန်းလွင်ထွန်း-ဧရာဝတီသတင်းဋ္ဌါနမှ ဒါရိုက်တာအောင်ဇေါ် -
မိဇျိမ္မသတင်းဋ္ဌါနမှ ဦးစိုးမြင့် -စသူတို့ မှာ မီဒီယာများမှတဆင့်
အထူးအားပေးအားမြှောက်ပြုသူများအဖြစ် လူသိရှင်ကြားဖြစ်သည် ။ သူတို့ အား
ရခိုင်လူမျိုးပါမက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပါ ယင်းသို့ အ
သိအမှတ်ပြုထားကြခြင်းဖြစ်သည် ။ သူတို့ ၏ မြှောက်ထိုးပင့်ကော်
ပြုမူခြင်းကြောင့် မည်သို့ အထိ အနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံ ဖြစ်သွားနိုင်သည်ကို
လေ့လာကြည့်စေလိုသည် ။ ယနေ့ အထိ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နယ်မြေဒေသ
မအေးချမ်းသေး ။ ဆူတုံးပူတုံး ။ ဆရာတော်ကြီးတွေကို ကုလားတွေက သတ်ဖြတ်နေသော
သတင်းတွေ ကြားလာရပြီ ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို မီးရို့ သည်ဟု ကြားလာရပြီ
။ လှေတွေနှင့် လူအုပ်စုတွေနှင့် လာကြပြီဆိုသော သတင်းတွေကို ကြားလာရသည် ။
လူနည်းစုမို့ လို့ သနားလှပါသည် ဆိုသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏
အားပေးနှစ်သိမ်းခြင်းခံရသော မူဆလင် ဘင်္ဂလီ သမိုင်းလိမ်ရိုဟင်ဂျာကုလားတွေက
ရခိုင်တွေကို သတ်ဖို့ ဖြတ်ဖို့မီးရို့ လာကြသည်ကို လူတိုင်းသိနေကြသည် ။
ထို့ ကြောင့် လူစုပြီး မိမိတို့ အသက်အိုးအိမ်ကို စောင့်ရှောက်ရန် အလို
့ငှာ ညမအိပ် မနေ့ မအိပ် နေပေးကြရသည် ။ အမှန်စင်စစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
သနားချစ်ခင်သော မူဆလင်ဘဂ်လီလူမျိုးကသာ ညမအိပ်ရ နေ့ မအိပ်ရ
နေကြရပြီဆိုလျှင် ဒေါ်စု၏ နုနယ်လှပသော လက်ချောင်းများဖြင့် သူတို့ ၏
မျက်ရည်ကို သုတ်ပေးပါက အဆိုးမဆိုသာ ။ ခုတော့ မိမိတို့ အသက်ကို
မသတ်ဖြတ်ရန် လူစုဝိုင်းဝန်း ကာကွယ်နေကြရသည်မှာ ရခိုင်လူမျိုးများသာ
ဖြစ်နေပါတော့သည် ။ ထို့ ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရခိုင်လူမျိုးတို့ ၏
မျက်ရည်ကို တလှည့် သုတ်ပေးရန် လိုသည် ။ မည်သို့ ပင်ဆိုစေ ယခုကိစ္စတွင်
ကြားဝင်စကားပြောပေးကြစေလိုသည်ဟု ကြားရသည် ။
နောက်တချက်မှာ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်၏ မိန့် ခွန်းနှင့်
ပတ်သက်၍ ကြိုဆိုထောက်ခံကြသည် ။ သို့ သော် အမိန့် မှာ
ထုတ်ပြန်ပြီးသော်လည်း လက်တွေ့ တွင် မထိရောက်ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ ရသည် ။
ဥပဒေအရ ထိမ်းသိမ်းကာကွယ် ပေးရမည့်အပိုင်းမှာ နှစ်ပိုင်းရှိနေရာ မြို
့ပြနယ်မြေဒေသကို ထိမ်းချုပ်ရခြင်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသထိမ်းချုပ်ရခြင်းတို
့မှာ ကွာခြားမှုများ ရှိနေနိုင်သည် ။ မြို့ ပြဒေသများတွင်
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းများရှိနေ၍ ပြသနာမှာ မထောင်းသာသော်လည်း
ကျေးလက်ဒေသများတွင်မူ ပုဒ်မ-၁၄၄-သည် လွှမ်းခြုံမှု မဖြစ်နိုင်ပေ ။ သို
့သော် အရေးပေါ်စီမံချက်အရ တပြည်နယ်လုံးတွင်မူ ထုတ်သင့်သည့်အခါ လက်နက်ကိုင်
ကျေးလက်ဒေသရှိ လူနေအိမ်ခြေများကို ဖျက်ဆီး သတ်ဖြတ် မီးရို့ခဲ့ သည်မှာ
မောင်တောမြို့ နယ်မှ ဖြစ်၍ ကျေးလက်ဒေသနယ်မြေများမို့အလှမ်းကွာဝေး၍
ဖြစ်နေနိုင်သည် ။ ခုတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ မြို့ တော်ဖြစ်သော စစ်တွေမြို
့ကို အကြမ်းဖက် သမိုင်းလိမ် ဘင်္ဂလီမူဆလင် လူမျိုးတို့ က
နည်းအမျိုးမျိုးနှင့် ၀ိုင်းအုံထိုးဖေါက် ကြိုးစားနေကြသည်ကို သိလာရသည် ။
သတိပြုမိသောအချက်တချက်မှာ အစိုးရမှ ခြိမ်းခြောက်ပစ်ခတ်မှု
တခုတလေမျှသာ ရှိနေပြီး ပြောရလျှင် အကြမ်းဖက် သမိုင်းလိမ်မူဆလင်များက
သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်၍ ရခိုင်လူမျိုးများ သေဆုံးနေရသည်ကို ကြားရသည် ။
မောင်တောမြို့ နယ်မှာ ဆိုလျှင် ဗမာလူမျိုးတွေ မီးရို့အသတ်ခံရခြင်း ၊
အလောင်းပျောက်နေခြင်း စသော သတင်းတွေ ကြားနေရပြီ ။ နဂါးမင်းစစ်ဆင်ရေးတုံးက
ဘင်္ဂလီမူဆလင် လူမျိုးးတို့ မှာ မှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးရာ၌ မတင်ပြနိုင်၍
ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားကြသည် ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို
ထွက်ပြေးကြသူများမှာ သောင်းဂဏန်းသာရှိပြီး ပြန်လည် လက်ခံလိုက်ရသည်မှာ
သိန်းဂဏန်းများအထိ လက်ခံလိုက်ရသည် ။ ရော၍၀င်လာသူများက
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှင်္နိုင်ငံသား ဘင်္ဂလီသားစစ်စစ်ဖြစ်သည် ။ ၁၉၈၈- ခုနှစ်တွင်
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီအရေးအခင်းဖြစ်ရာ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများ
ပြည်ပအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြရသည် ။ ခါတော်မှီ
ဒုက္ခသည်အဖြစ် မောင်တောမြို့ နယ်မှာ နေထိုင်သော ဘင်္ဂလီလူမျိုးတိ့ မှာ
အနေချောင်မှန်း သိ၍ ဘ၈င်္လားဒ့ရှင်္နိုင်ငံဖက်သို့ 
ခံယူကြသည် ။ မည်မျထွက်ပြေးသွားကြသည်ကို စာရင်းအတိအကျ မသိရသော်လည်း
-UNHCR-စာရင်းအရ ဒုက္ခသည်စခမ်းထဲမှာ -၂-သိန်းကျော်တောင် ရှိနေသည် ။
ထူးခြားချက် တခုမှာ ယင်းဒုက္ခသည်စခမ်းတွင် မောင်တောမြို့ နယ်သား
မည်သည့်ဗုဒ္ဒဘာသာလူမျိုး ( ရခိုင် လူမျိုး-သက်လူမျိုး-ဒိုင်းနက်လူမျိုး
မြိုခေါ်ခမီးလူမျိုး -မရမာကြီးလူမျိုး ) မှ တယောက်တလေမျ မပါဝင် ။
မောင်တောမြို့ နယ်တွင် ဘင်္ဂလီမူဆလင် လူမျိုးတို့ သည်
မြန်မနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီအရေးအခင်းတွင် လှုပ်ရှားကြသူများ မဟုတ်ကြ ။ ထို
့ကြောင့် ယင်းအချိန်က န၀တ စစ်အစိုးရမှာ သူတို့ အား ဖမ်းဆီးရန်
ဘာမျှအကြောင်းမရှိ ။ သို့ သော် သူတို့အမှန်တကယ်ပင်
ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်၍ ဒုက္ခသည်များအဖြစ် စခမ်းတွေမှာ နေရကြရတော့ပြီ ။
တချိန်တည်းမှာပင် သူတို့ အား လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ခံရပါသည်ဟု
မီဒီယာတွေက လွှင့်ထုတ်လာတော့ မြန်မာပိုင်းအသံလွှင်ဋ္ဌါနက ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာ
ဘာမှန်းမသိ သတင်းလွှင့်ရရင်ပြီးရော သဘောမျိုးဖြင့် လူ
့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်သော စစ်အစိုးရဟု ကင်ပွန်းတပ်ရုံမျှနှင့် သူတို
့နာမည်ကို ကမ္ဘာကသိအောင် ကြေညာပေးပါတော့သည် ။ ယင်းကား သမိုင်းလိမ်ဘ၈င်္လီ
မူဆလင်လူမျိုးတို့၏ နာမည်ဖြစ်သည်။
နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်လောက် သူတို့ မှာ ဒုက္ခသည်များကို ဦးတည်ထားကာ
ချမှတ်ကြသည် ။ ယင်းစီမံကိန်းကား ရခိုင်ပြည်နယ်မှသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏
နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲပေါ်မူတည်ကာ အစ္စလမ်မစ်နိုင်ငံတခုဖြစ်အောင် နယ်မြေသစ်
ယခင်က အစိုးရ၏ ဖမ်းဆီးခြင်းခံရမည်ဟု ဆိုပြီး တဖက်နိုင်ငံသို့ 
ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သော ဘင်္ဂလီမူဆလင်လူမျိုးတို့ မှာ ယခုအချိန်တွင်
ပြည်တွင်း၌ပင် ဆူပူသောင်းကျန်းပြီး တဖက်နိုင်ငံသို့ထွက်ပြေးခြင်း
မပြုကြသည်မှာ စဉ်းစားစရာဖြစ်သည် ။ ယခုသူတို့ ၏ လှုပ်ရှားနည်းမှာ တုတ်ဒါး
တို့ ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်သော ကုလားခြောက်နည်းမျိုးဖြစ်သည် ။
လူများစုရှိနေသော ရခိုင်လူမျိုးတို့ ၏ နယ်မြေထဲတွင် တယောက်စ နှစ်ယောက် စ
ရန်စပြီး လှုပ်ရှားနေလာသည်မှာ စဉ်းစားစရာဖြစ်သည် ။ အစိုးရမှ
သေနတ်များဖြင့် မပစ်ခတ်သည်ကို အခွင့်ကောင်းယူက ပြုလုပ်နေကြခြင်းဖြစ်သည် ။
အကယ်၍ ပစ်ခတ်လျင် ကမ္ဘာကို ငိုပြမည်ဆိုသော အတွေးအခေါ်မျိုးကား သူတို့ မှာ
ရှိနေပြီး ဖြစ်သည် ။ ခုတောင်မှ သတင်းတွေကို ပြောင်းပြန်
လိမ်နည်းမျိုးဖြင့် တင်ထားနေသေး နေဆဲ ဖြစ်ပါသည် ။ ပြသနာတခုခုဖြစ်လာပြီး
ထိမ်းမနိုင် သိမ်းမရဖြစ်လာသည်အထိ သူတို့ သည် ပြည်တွင်းတွင်
လှုပ်ရှားကြမည်ဆိုသော စီမံကိန်းဖြစ်သည် ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်
တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ( ၁၃၅ ) မျိုး၌ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး မပါဘူးဟု
တနိုင်ငံလုံးမှ ထုတ်ဖေါ်လာချိန်တွင် သူတို့ အနေဖြင့် နှစ်ဖက်ခွ
စစ်မျက်နှာကို စစ်ဆင်ရေးအဖြစ် အသုံးပြုလာခြင်းဖြစ်သည် ။
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး ကို အသိအမှတ် မပြုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ
မူဆလင်လူမျိုးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမည်လားဆိုသော စစ်ဆင်ရေးစီမံကိန်းကို
ပြုလုပ်လာနေခြင်းဖြစ်သည် ။ အကယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံမူဆလင်လူမျိုးပါ
ဆိုလိုက်သည်နှင့် ယခုခိုးဝင်နေထိုင်သူကော- မှတ်ပုံတင်မရှိသေးသူကော-
အသိအမှတ်ပြုပေးစေရန် လှုပ်ရှားနေကြခြင်းသဘောမျိုးဖြစ်နေသည် ။ ယင်းသို့ 
တခုခုကို ရရှိသွားပြီ ဆိုလျင် နိုင်ငံသားတယောက်၏ ရပိုင်ခွင့်များကို
ခံစားသွားရတော့မည်ဖြစ်သည် ။ မျက်မှောက်အခြေအနေအရ ရခိုင်လူမျိုးတို့ နှင့်
ရောထွေးယှက်တင် မနေနိုင်လို၍ မောင်တောမြို့ နယ် ဘူးသီးတောင်မြို့ နယ်ကို
မြန်မာနိုင်ငံသား မူဆလင် လူမျိုးများ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ
နယ်မြေအဖြစ် ပေးပါဟု ဆိုလျင် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေဖြင့်
ဘေးကြပ်နံကြပ်ဖြစ်မည်လားဟု တွေးတောထားရမည်ဖြစ်သည် ။ သို့ မဟုတ်
နိုင်ငံသားတယောက်၏ အကျိုးခံစားခွင့်အရ ခရီးသွားလာခွင့်ကို ရရှိသွားသောအခါ
သမိုင်းလိမ်ဘ၈င်္လီမူဆလင် ဘူမျိုးတို့ ကား မည်သည်နည်းနှင့်မျှ
ရခိုင်မြေပေါ်တွင် နေလိုလှမည်မထင် ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ 
၀င်ရောက်သွားရပြီဆိုပါက သူတို့ စီမံကိန်းဖြစ်သော အစ္စလမ်မစ်
မြန်မာနိုင်ငံကား တနေ့ မုချဖြစ်သွားမည်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ထားကြသည် ။
ယင်းသို့ ဖြစ်အောင် ပြည်ပက မူဆလင် ဘာသာဝင် နိုင်ငံများက
ပြည်ပကျူးကျော်မှုမျိုးဖြင့် အကူအညီများ မပေးနိုင်ဟု မည်သူကမျှ
ပြသနာသည် သာမန်သွေးရိုးသားရိုးမဟုတ်ချေ ။ ထို့ ကြောင့် သူတို့ မှာ
စစ်ဆင်ရေးစီမံကိန်းကို နှစ်မျိုးနှစ်စား ချထားမှန်း သတိထားရမည်မှာ
ယခုအချိန်ပင်ဖြစ်သည်ဟု မြင်သည် ။ အစွမ်းကုန်ကာကွယ် ဆန့် ကျင်ရမည်မှာ
ကျွန်တော်တို့ ၏ နိုင်ငံရေးအသိပင်ဖြစ်ပါကြောင်း ။။။။။။။။။။။။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/11/20120အကြံပြုခြင်း
ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများ ပိုမိုဖြစ်ပွားလာသော ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့နယ်တွင် ဓည၀တီကုန်သည်လမ်း၊ စက်ရုံစုအနီးတစ်ဝိုက်တွင် မီးရှို့မှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီး လုံခြုံရေးအင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့် ဒေသခံများမှာ ညအချိန်ရောက်ရှိမည်ကို စိုးရိမ်နေကြကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေး ပါတီဝင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“ညဘက်မှာ လုံခြုံရေးတွေသာ လာမကယ်ရင် အားလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်မယ်”ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။
ဓည၀တီရပ်ကွက်တွင် ယခုအခါ တပ်မတော်သားအယောက် ၂၀ ခန့်သည် နေအိမ်များကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေသော ဘင်္ဂါလီများကို ၀င်ရောက်ပစ်ခတ်နေကြောင်း၊ သို့သော် အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့် ဘဂါင်္လီများမှာ အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းမှ ထွက်ခွာမသွားသေးဘဲ မီးရှို့မှုများကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
ဓည၀တီ ရပ်ကွက်တွင် နေအိမ်များကို မီးရှိုဖျက်ဆီးရန် ဆောင်ရွက်နေသော ဘင်္ဂါလီများကို တွေ့မြင်ရစဉ်
ဆူပူ အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် မီးလောင်ကျွမ်း နေသော စစ်တွေမြို့ ဓညဝတီရပ်ကွက်ကို ယနေ့ည ၆ နာရီက တွေ့မြင်ရစဉ်
စစ်တွေမြို့ပေါ်တွင် ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် တပ်မှ ကားတစ်စီး ရောက်ရှိလာသည်ကို တွေ့ရကြောင်း ၄င်းက ပြောကြားသည်။
လူမျိုးရေးအသွင်ဆောင်သော ဆူပူအကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခမှု များ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အကြမ်းဖက်မှု၊ နေအိမ်များ မီးရှို့ခံရမှုတို့ကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြသော ဒုက္ခသည် တစ်သောင်းကျော်(၁၂၀၇၄ဦး)အထိ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ၂ နာရီအထိ စာရင်းအရ မောင်တောမြို့နယ်တွင် ဒုက္ခသည် ၃၈၇၄ဦး၊ ဘူးသီးသောင်းမြို့နယ်တွင် ဒုက္ခသည် ၁၃၀၀ဦး၊ စစ်တွေမြို့တွင် ဒုက္ခသည် ၄၉၀၀ဦးနှင့် ရသေ့တောင်တွင် ဒုက္ခသည် ၂၀၀၀ဦး စုစုပေါင်း ၁၂၀၇၄ ဦးရှိကြောင်း အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြသည်။ “အခုဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်မှာ တစ်ဖက်နိုင်ငံက ဘဂါင်္လီတွေ ကျူးကျော်လာတဲ့ ပြသနာဟာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ အနောက်ဘက်တံခါးကြီး ကျိုးပျက်သွားခြင်းပါပဲ”
(ရန်ကုန်မြို့တော် ရွှေဂုံတိုင်ရှိ တို့ရိုးရာစားသောက်ဆိုင်တွင် ယနေ့ ညနေ ၄နာရီတွင် ရခိုင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးဆောင်ကျင်းပသော ရခိုင်ပြသနာများနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှပြောကြားချက်)
အရေး ပေါ် အခြေအနေကြေငြာ ပြီးနောက် ရခိုင် ပြည်နယ် တွင် ရိုဟင်ဂျာ များ အကြမ်းဖက်မှု ဆက်လက်ရှိနေ
. by FNG on June 11, 2012 နောက်ဆုံး ရသတင်း များ ...စစ်တွေ မြို့ဗျိုင်းဖြူ ရွာ တွင် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အကြမ်းဖက် သမား များ က သေနတ် ဖြင့် ပစ် ခတ် မှု ကြောင့် ရခိုင် တိုင်း ရင်းသား နှစ်ဦး သေဆုံး သည် ဟု သတင်း ရရှိသည်။ ရခိုင် ပြည် နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ကုလ သမဂ္ဂ အကူအညီပေးရေး ၀န်ထမ်း များ လုံခြုံရေး အခြေအနေ ကြောင့် ထိုဒေသများ မှပြန်လည် ထွက် ခွာ သည် ဟု CNN သတင်း တွင် ဖော်ပြထားသည်။ဓည၀တီ ကျေး ရွာ တွင် ဘင်္ဂါ လီ များ က ဓာတ်ဆီပုံများ နှင့် မီးရှို့ရန် ကြံစည်နေ မှု ကို အချိန် မှီသိရှိ ပြီး ဖမ်းဆီး နိုင်ခဲ့သည်။ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ရခိုင် ပြည်နယ် စစ်တွေ မြို့တွင် ဇွန်လ ၁၀ ရက် နေ့က ဘင်္ဂါလီ တို့၏ အကြမ်းဖက် မီး ရှို့မှု နှင့် ပြည်သူ ပိုင် ပစ္စည်းများ ဆက်လက် ဖျက်ဆီး မှု များ ရှိနေခြင်း ကြောင့် မြန်မာ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့ စည်း ပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၀၂ ပုဒ်မခွဲ ဃ အရ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ယနေ့မှစ၍ အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေငြာ ထား သော်လည်း စစ်တွေ မြို့တွင် ည လုံးပေါက် မငြိမ်သက် မှု များ ဆက် လက်ရှိနေခဲ့ သည်။ ညမထွက် ရ အမိန့် ကြောင့် စစ်တွေ မြို့ ပေါ် လမ်း မများ တွင် လူသူ ကင်းရှင်း နေသော် လည်း ဘင်္ဂါ လီ အများစု နေ ထိုင် ရာ ရပ် ကွက် များ တွင် ပြည်သူ ပိုင် နှင့် အစိုးရ ပိုင် ပစ္စည်း များ ကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီး မှု များ ရှိ ခဲ့ သည်။ ဘင်္ဂါလီ အများစု နေထိုင်ရာ ရွာ မင်းဂံ ရွာ တွင် ရိုဟင်ဂျာများက ညမထွက် ရ အမိန့်ကို အံတု က စုဝေး နေကြ ပြီး မင်းဂံ ရှိ ရွာဦး ကျောင်း တိုက် ဘုန်းတော် ကြီး ကျောင်း ကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီး မည် ဟု သတင်း များ ထွက် ပေါ် မှု ကြောင့် လုံခြုံရေး တပ် ဖွဲ့ များ တိုးမြှင့် ချထား ရသည် ဟု စစ်တွေ မြို့ မှ အင်တာနက် ဆိုင် ပိုင်ရှင် တစ်ဦး က ပြောသည်။ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ညနှင့် ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ မနက် ပိုင်း တွင် စစ်တွေ မြို့ ဉ်ဘင်္ဂလီ တို့၏ မီးရှို့ မှု များ ရှိခဲ့ ပြီး အချို့ဘင်္ဂါ လီ များ မှာ မိမိ အိမ် ကိုယ် ကို တိုင် မီးတင် ရှို ကြ ပြီး ပင်လယ်ထဲ သို့ ထွက် ပြေး ကြသည်။ ယမန် နေ့ညက စစ်တွေ မြို့ရှိ နာဇီ ကျေးရွာ ကို ဘင်္ဂါ လီ အကြမ်း ဖက် သမား များ က မီး ရှို့ မည် ဟု သတင်း ရရှိသောကြောင့် ရွာ လုံး ကျွတ် နီးပါ ထွက် ပြေး တိမ်းရှောင် နေရသည်။ မြန်မာ အစိုးရ သမ္မတ ရုံး ပြန်ကြား ရေး အရာ ရှိ ဗိုလ်မှုး ဇော်ဌေး ၏ Facebook စာမျက် နှာ တွင် မူ စစ်တွေမြို့အနီးရှိ အနောက်ဖရုံကာကျွန်းအနီးတ၀ိုက်၌ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ ခိုအောင်လျက် ရှိပြီး ညပိုင်း တွင် စစ်တွေမြို့သို့ တိတ်တဆိတ်တက်ကာ မီးရှို့လေ့ ရှိကြောင်း၊ မီးရှို့ပြီးနောက် စက်လှေများဖြင့် ပြန် လည်ထွက်ပြေးသွားလေ့ရှိကြောင်ူး စစ်တွေမြို့၊ ကမ်းနားလမ်းနေ ပြည်သူများမှ သတင်းပေးပို့ခဲ့သည်။ စစ်တွေရှိ ပြည်သူများမှာ ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသဖြင့် ညပိုင်းအချိန် အခွင့် ကောင်းယူ၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည် ဟု ဖော်ပြထား သည်။ ယနေ့ မနက် အစော ပိုင်း က ရိုဟင်ဂျာ များ အကြမ်းဖက်မှု စတင်ခဲ့ သည့် မောင်တော မြို့ နယ် တွင် ဗိုလ်မှုး ကျေးရွာ ကို မီးရှို့ ခြင်း ၊ သောက်ရေကန် များ ကို အဆိပ် ခတ် ရန် စီစဉ် ခဲ့ ခြင်း များ ကို ရို ဟင်ဂျာ များ က ပြု လုပ် ခဲ့ သည် ဟု သိရသည်။ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ည ကတည်း က မြန်မာ စစ်တပ် မှ စစ်တွေ နှင့် မောင်တော မြို့ များ သို့မြန်မာ့ လေတပ် ၏ အကူ အညီ ဖြင့် လုံခြုံရေး တပ် ဖွဲ့ဝင် များ ပို့ ထား ပြီး စစ်တွေ ခရိုင် တွင် အကြမ်း ဖက် ရိုဟင်ဂျာ များ တာဝန်သိ ပြည်သူ များ ၏ သတင်း ပေး မှု ဖြင့် စတင် ရှင်းလင်း နေသည် ဟု သိရသည်။ မောင်တော တွင် ဖမ်းဆီး ရမိ သည့် ရိုဟင်ဂျာ များ တွင် RPG နှင့် ပခုံး ထမ်း လောင် ချာ များ ကို တွေ့ ရှိသည် ဟု ဆိုသည်။ ယနေ့မနက် အစောပိုင်း တွင် စစ်တွေ မြို့စွန် ရှိ အိမ် တစ်ချို့မှာ ဘင်္ဂါလီ များ ၏ မီး ရှို ခြင်း ကို ခံရ ပြီး ၎င်း တို့က လေး ခွ ဖြင့် ချောင်း မြောင်း ပစ်ခတ် မှု ကြောင့် ဒဏ် ရာ ရရှိ သူ များ ရှိသည်။ စစ်တွေ ခရိုင် အတွင်း ရှိ အချို့ကျေး ရွာ များ ဖြစ်သည့် ရွာသာယာရွာနှင့် နာဇီ ရွာ တို့မှာ ဘင်္ဂါ လီ ရိုဟင်ဂျာ များ ၏ ခြိမ်းခြောက် မှု ဆက် လက် ရှိ နေဆဲ ဖြစ်သည်။ ဒဏ်ရာ ရှိသူများ ကို စစ်တွေ ဆေးရုံကြီး တွင် ကုသမှု ပေး နေသည်။ http://freedomnewsgroup.com/2012/06/11/rakhine-unrest-3/#
အင်္ဂလန်ရောက် ဘင်္ဂလီတွေ လာမဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ လန်ဒန် မြန်မာသံရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒပြဖို့ ရှိ
ByKyaw H. Aung
Time : 12:00 -13:30
Place : In front of Burmese Embassy, 19A Charles Street, London, W1J 5DX
Nearest Tube : Green Park (Piccadilly & Victoria Line)
Tun Khin -07888714866
Hamaz Kyaw Zwa - 07828426801
Kyaw Win -07403452378
Monir - 07723920447
သူတို့ဘက်က လူ ၂၀၀၀ ကျော် သေပြီဆိုပြီး ပေါက်တတ်ကရတွေ လျှောက်ပြောပြီး ကမ္ဘာကို လိမ်နေတယ်။ သက်သေဘာမှ မပြနိုင်ပဲ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာတွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဆီကို နေ့စဉ်အစီရင်ခံစာအမှားတွေကို ပေးပို့နေတယ်။
ဲဗြိတိန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ Counter ဆန္ဒသွားပြကြဖို့ လေးလေးနက်နက် တိုက်တွန်းပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူများက ဘင်္ဂလီအရေးဟာ မူဆလင်အရေးမဟုတ်ဘူးလို့ ခံယူတယ်။ ၈၈၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ကို ကိုကိုကြီနဲ့ ကိုမြအေးတို့ကလည်း ဘင်္ဂလီတွေ မြန်မာမူဆလင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်နေတာဟာ သွေးရိုးသားရိုးမဟုတ်ဘူးလို့ ယုံကြည်ကြတယ်။
အခုလည်း ဒီဆန္ဒပြပွဲကို လန်ဒန်ရှိ Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK) နဲ့ Burmese Muslim Association (BMA) က ပူးပေါင်းကျင်းပမယ်လို့ ဆိုတယ်။
ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ ဘင်္ဂလီတွေဟာ ရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့ အရေးကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တခြားဒေသတွေဆီကိုလည်း ပြန့်နှံ့ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ ဘင်္ဂလီအကြမ်းဖက်မှုတွေကို ဒီထက်ကျယ်ပြန့်အောင် လုပ်နေကြတယ်။ ဒါကြောင့် လန်ဒန်ရောက် မြန်မာမူဆလင်တွေကို ဒီအရေးမှာ မပါဝင်ဖို့ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် တွန်းမပို့ဖို့ ဆက်သွယ်တားမြစ်ကြပါ။ ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာများအနေနဲ့ သွေးထွက်သံယိုမှုများ ဆက်လက်မဖြစ်အောင် တားမြစ်ကြပါလို့ အလေးအနက် တိုက်တွန်းပါရစေ။
ကနေဒါ အစိုးရလွတ်တော်တွင် ကချင်အရေးအဆိုတင်သွင်း
ကနေဒါ ရောက် ကချင် အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားအဖြစ် Parliament Hill, Ottawa, capital city of Canada, ကနေဒါ ဗဟိုမှ သက်ဆိုင်ရာ (Federal Departmen) ဋ္ဌာန(၃)ခုသို့ သွားရောက်ကာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ လူကြီးများ၊ Canadian International Development Agency (CIDA), Department of Foreign Affairs International and Trade ( DFAIT), representatives of United Nation , hte Assistant Deputy Speaker – MP Bruce Stanton hte laga NGOs
တို့မှ တာဝန်ယူပြီး သက်ဆိုင်ရာလူကြီးများအားဖိတ်ကြားကာ
(၁)-စစ်ပွဲကြောင့် ပြည်တွင်းရှိ ပြည်သူများ၏ ဒုက္ခအခက်အခဲများအား ထိရောက်စွာ ကူညီသွား
(၂)-စစ်ပြေးဒုက္ခသည်(IDPs) များအား ကူညီထောက်ပံ့ရန် နှင့် human rights violations အား
(၃)-ကနေဒါ အစိုးရအနေဖြင့် တည်းသန့် အဖွဲ့စည်းတရပ်ဖွဲ့စည်းပြီး သက်သေအဖြစ် ကချင်
အထက်ပါ အချက်များအား ကနေဒါ အစိုးရထံတွင် တင်သွင်းလိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း။ ဆက်လက်
၍ Signature petition hte Statement letter (Global Action Day for the Kachins) များအား
သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ ရုံးဝန်ထမ်းများ လက်သို့ပေးအပ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိသောအကြမ်း ဖက်မှု့များကြောင့်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးတွင်ဒုက္ခသည်ပေါင်း၁၂၀၇၄ဦးရှိသွား ပြီဖြစ်ကြောင်းရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီမှယနေ့မွန်းလွဲ၂နာရီအထိ ကောက်ခံထားသော စာရင်းများအရသိရသည်။ ပါတီတာဝန်ရှိသူများပြောကြားချက်အရဒုက္ခသည်ဦးရေမှာထပ်မံတိုးလာ ဖွယ်ရှိနေသေးပြီး မောင်တောမြို့နယ်တွင် ၃၈၇၄ဦး၊ စစ်တွေမြို့နယ်တွင် ၄၉၀၀ဦး၊ဘူးသီးတောင်တွင်၁၃၀၀ဦးနှင့်ရသေ့တောင်မြို့နယ်တွင်၂၀၀၀ဦးခန့်ရှိပြီးဒုက္ခသည်အများစုမှဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ၏မီးရှို့ဖျက်ဆီးမည့် ရန်ကိုစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ကာရွာများကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးလာသူများအများဆုံးဖြစ်သည်ဟုသိရသည်။ဒုက္ခသည်စခန်းအများစုကိုဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ စာသင်ကျောင်းများနှင့် အချို့နေရာများတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းများတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသည်ဟု အဆိုပါပါတီမှသိရသည်။
အင်တာနက်တွင်ပျံ့နှံ့နေသောမသီတာထွေးသေဆုံးပုံကိုလျှပ်တပြက်ဂျာ နယ်အတွဲ၉အမှတ်၃၁တွင်ပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတွက်လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်ထုတ်ဝေခွင့်ကိုယာယီရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်းစာပေစိစစ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ဌာနတွင်ယနေ့ ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးအချိန်မည်မျှရပ်ဆိုင်းမည်ကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေ။ လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော သတင်းနှင့်ဓာတ်ပုံများမှာစာပေစိစစ်ရေးသို့တင်ပြခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းလည်းကြေငြာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဇွန် ၁၁ ရက် မောင်တောမြို့အခြေအနေမှာ မငြိမ်သက်သေးသဖြင့် ဌာနဆိုင်ရာရုံးများနှင့် ဘဏ်များကို ပိတ်ထားပြီး ဒေသတွင်း ပဋိပက္ခများကြောင့် မြို့တွင်းတွင် သွားလာသူများမှာ နည်းနေပြီး ဈေးများမှာလည်း မဖွင့်သည့်အတွက် ဒေသခံများ ၄၊ ၅ ရက်အတွင်း စားနပ်ရိက္ခာ ပြတ်လတ်မှုအတွက် စိုးရိမ်နေရကြောင်း သိရသည်။
မောင်တောမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေး ရွာများတွင် တာဝန်ကျနေကြသည့် ကျောင်းဆရာ/မများမှာ ဖြစ်ပွား နေသည့် ပဋိပက္ခများကို စိုးရိမ်ကာ မိမိတို့နေထိုင်ရာ မြို့များသို့ ထွက်ခွာသွားရန် စီစဉ်နေကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါ ဆရာ/ မများ သွားလာနိုင်ရန်အတွက် သက် ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးများ နှင့် ဒေသခံဆရာ/မများက စီစဉ်နေကြပြီး ယခုနှစ်တွင် အသစ်တာ ၀န်ကျလာသည့် ဆရာ/မများကို လိုက်ပါ ပို့ဆောင်သည့် မိဘများလည်း မောင်တောမြို့မှ ပြန်ရန် အခက်တွေ့နေကြောင်း သိရသည်။
မောင်တောမြို့တွင် ဖြစ်ပွာနေသော ပဋိပက္ခများကြောင့် နယ်ကျေးရွာများမှ ရောက်ရှိလာကြသည့်ဒုက္ခ သည်များအတွက် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများကို လေယာဉ်နှစ်စင်းဖြင့် စစ်တွေမြို့မှ မောင်တောမြို့ သို့ ယနေ့နံနက် ၈ နာရီခန့်တွင် ရောက်ရှိလာကြောင်း သိရသည်။
နံနက် ၉ နာရီခန့်တွင် မောင်တောမြို့ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်ရှိ ဘင်္ဂါလီများမှာ မိမိနေအိမ်ကို မီး ရှို့ထွက်ပြေးနေသည့်အတွက် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ မီးငြှိမ်းသတ်နေရကြောင်း သိရသည်။ အ ဆိုပါအိမ်များကို မီးငြှိမ်းသတ်နေ စဉ် အမှတ်(၄)ရပ်ကွက် ဗိုလ်မှူးရွာမှ ဘင်္ဂါလီများမှာလည်း မိမိနေ အိမ်များကို မီးရှို့ကာ မြို့ပြင်သို့ ထွက်ခွာသွားနေကြကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါမီးလောင်နေအိမ်များကိုလည်း လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ မီးငြှိမ်းသတ်ရှင်းလင်းနေရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
စ⁠စ်တွေမြို့၊ နာဇီကျေးရွာအနီးရှိ ဗုဒဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသုံးခုကို ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများက ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီခန့်က မီးရှို့ခဲ့ပြီး ယခုအခါ မီးငြိမ်းသွားပြီဖြစ်သော်လည်း မီးခိုးများထွက်ပေါ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းစ⁠စ်တွေမြို့ ရှိ
စစ်တွေမြို့နှင့်သံတွဲမြို့များမှ ပြန်လာသည့်ခရီးသည်များကို ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင်စနစ်တကျစစ်ဆေးမှု့များပြုလုပ်နေကြောင်း ရန်ကုန်လေဆိပ်မှအဓိက တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောကြားသည်။
“လူဝင်မှု့ကြီးကြပ်ရေး(လ၀က)ကိုစစ်ခိုင်းထားတာပါ။မှတ်ပုံတင်နဲ့လူနဲ့တိုက်စစ်ဖို့။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့လူနဲ့တိုက်စစ်ဖို့၊ နောက်ပြီးသတင်းကြားထားတဲ့ လူတွေပါလာမလာစစ်ဖို့ ညွှန်ကြားထားတာပါ”ဟု လေဆိပ်မှ အဆိုပါတာဝန်ရှိသူကပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်မြို့မှစစ်တွေမြို့သို့ထွက်ခွာမည့် အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်းအားလုံးကို ဇွန်လ၁၁ရက်နေ့တွင် စတင်ရပ်နားလိုက်ကြောင်း အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးအခြေစိုက် စစ်တွေအဝေးပြေးဂိတ်များထံမှ စုံစမ်းသိရသည်။
“နယ်မြေအေးချမ်းမှု့အပေါ်မူတည်ပြီး ပြန်ထွက်မယ်။”ဟု ရန်ကုန်-စစ်တွေ တိုးရတနာဂိတ်မှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။
ယနေ့(ဇွန်၁၁ရက်) နံနက် ၉နာရီ မိနစ်၃၀ ခန့်ကမောင်တောမြို့နယ် ဗိုလ်မှူးရွာတွင် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတစ်ဦးက သူ၏နေအိမ်ကို မီးရှို့ခဲ့သဖြင့် မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး ၁၅မိနစ်အတွင်း ငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့သဖြင့် အိမ်တစ်လုံးသာ လောင်ကျွမ်းသွားကြောင်း မောင်တောမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက အတည်ပြုပြောကြားသည်။
မောင်တောမြို့နယ်တွင် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတစ်ခုထပ်မံဖွင့်လှစ်လိုက်ကြောင်း မောင်တောသတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။ ယခုဖွင့်လှစ်လိုက်သည့် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာစတုတ္ထမြောက်ဖြစ်ပြီး ဒက်ရွာ အ.မ.က ၅ တွင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အအဆိုပါစခန်းသို့ရောက်ရှိလာသူများမှာ မောင်တောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်း တောင်ပြိုလက်ဝဲမြို့နယ်ခွဲမှ ဘဂါင်္လီရွာအနီးရဲအောင်ချောင်းတွင် ဂဏန်းဒိုင်ဖွင့်ပြီးလုပ်ကိုင်နေထိုင်နေကြသည့်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများဖြစ်သည်။
ယင်းဒေသခံတိုင်းရင်းသားများမှာ အနီးအနားရှိကျေးရွာများ လုံခြုံသည့်မောင်တောမြို့သို့ပြောင်းရွေ့သွားကြသည့်အတွက် ၄င်းတို့လည်းပြောင်းရွေ့လာကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
လက်ရှိမောင်တောတွင်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ၄ ခုဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော အကြမ်းဖက်မှု့များကို ဆန့်ကျင်ရှုံ့ချကြောင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမီဒီယာများဖြစ်သော BBC, RFA ,VOA,DVBသတင်းဌာနများ၏ဘက်လိုက်ရေးသားမှု့များကိုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်းနှင့်အကြမ်းဖက်မှု့များကိုဥပဒေအရ နှိမ်နင်းအရေးယူနေ သောတပ်မတော်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် တစ်သားတည်းရှိကြောင်း ပြသရန် ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးဆန္ဒဖော်ထုတ်မှု့တစ်ရပ် ယနေ့နံနက် ၁၀နာရီ မှ ၁၁နာရီအထိ ဆူးလေ၊မြို့တော်ခန်းမအနီးဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူများမှာပါတီ၊နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းစွဲများမရှိဘဲ မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်မြတ်နိုးကြသော မျိုးချစ်မြန်မာများဖြစ်သည်ဟု ရည်ညွှန်းထားကြသည်။
ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းကရွှေတိဂုံဘုရားအနောက်ဘက်မုဒ်၊ရခိုင်တန်းဆောင်းတွင်ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး စုဝေးမိကြသူများသည် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဒုက္ခသည်များကို ကူညီရန် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကာ ယနေ့နေ့လည် ၂နာရီဝန်းကျင်တွင် လေးဝတီအမည်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်လိုက်ပြီဖြစ်ပြီး လာရောက်သူအားလုံးကရွေးချယ်သော ကော်မတီဝင် ၉ဦးပါသည့်အဖွဲ့အဖြစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ကာ လာရောက်သူ ၃၀၀ကျော် ကလည်းတက်ရောက်ကြောင်းလက်မှတ်များရေးထိုးခဲ့ကြကြောင်းထိုနေရာတွင် ရောက်ရှိနေသော7DayNewsသတင်းထောက်ကသတင်းပေးပို့သည်။ လေးဝတီငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဒုက္ခသည်များကို ထိရောက်သောအကူအညီများပေးနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး ထိုနေရာတွင်အလှူငွေချက်ချင်းကောက်ခံရာလာရောက်သူများထည့်ဝင်ငွေတစ်သိန်းရှစ်သောင်းကျော်ရရှိကြောင်းသိရပြီးအဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်လှူဒါန်းလိုပါက ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ရွှေတိဂုံဘုရားအနောက်ဘက်မုဒ်သို့ ရခိုင်ပြည်နယ်အကြမ်းဖက်မှု့များကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြရန်စုဝေးရာမှယခုကဲ့သို့ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးတက်ရောက်သူများတွင်လူငယ်နှင့်လူလတ်အရွယ်အများစုဖြစ်ပြီး သံဃာတော်များလည်း အပါး ၄၀နီးပါးပါဝင်သည်ဟု သတင်းထောက်ကသတင်းပေးပို့သည်။
သိရိမြိုင် ၄လမ်း၊ ၁၃ရပ်ကွက်၊လှိုင်မြို့နယ်
ဖုန်း- ၀၉ ၄၃၀ ၈၂ ၇၅၂
ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကို သက်ဆိုင်ရာက ယနေ့တွင် ဖမ်းဆီး
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့၊ နာဇီရပ်ကွက်ထဲသို့ ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီ သောင်းကျန်းသူ ကုလားများက ဝင်ရောက်မီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ရပ်ကွက်လုံး မပြောင်ပေမယ့် ရခိုင်အိမ်အများစု မီးထဲပါသွားပါတယ်။ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့က ပစ်ခတ်ခြောက်လှန့်ခဲ့ကြောင်း၊ အသေအပျောက်တွေတော့ မရှိကြောင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများ ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပေါက်တောမြို့မှာ ရိုဟင်ဂျာကုလားများနှင့် ဒေသခံရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ အပြန်အလှန် မီးရှို့ခဲ့ကြပါတယ်။ ရခိုင်အဖွားကြီးတစ်ယောက် ဓားခုတ်ခံရလို့ သေဆုံးသွားရပြီး၊ ရခိုင်အမျိုးသား လေးယောက်သေနတ်မှန်လို့ ပေါင်ကျိုးသွားပါတယ်။ အဲဒီလေးယောက်ကို သေနတ်နဲ့ပစ်တဲ့သူဟာ မောင်လှကြီးနဲ့ ဆာမြိုင်ဆိုတဲ့ ရိုဟင်ဂျာကုလားများ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒဏ်ရာရသူ လေးယောက်ထဲက တစ်ယောက်ဟာ ဒဏ်ရာပြင်းထန်လို့ စစ်တွေဆေးရုံ အရေးပေါ်ဌာန ရောက်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ လက်နက်ကိုင် ရိုဟင်ဂျာကုလားများကို စစ်တပ်က မချေမှုန်းဘဲ လက်ရှောင်နေပုံရကြောင်း ဒေသခံတွေက ပြောနေကြပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာကုလားများနှင့် အယ်လ်ကိုင်ဒါးတွေ ဆက်သွယ်မှုများ၊ သင်တန်းပေးပုံများ၊ သင်တန်းတက်ပုံများ စတဲ့ အထောက်အထား အချက်အလက်တွေပါတဲ့ လက်ပ်တော့ပ်တစ်လုံး ကိုင်ဆောင်လာသူ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို စစ်တွေ လေဆိပ်မှာဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အမျိုးသမီးဟာ ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီကုလားမ ဖြစ်ပြီး၊ UNHCR-မှာ အလုပ်လုပ်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း UNHCR-အကာအကွယ်နဲ့ ရန်ကုန်သို့ ကမ္ဘောဇလေယာဉ်နှင့် လက်ပ်တော့ပ်သွားပို့မယ့် ခရီးမှာ လေဆိပ်လုံခြုံရေး ဝန်ထမ်းတွေက ဖမ်းမိသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ လေယာဉ်ထိုင်ခုံ နံပါတ်ဟာ.. အမှတ်(၆) ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ အဆိုပါ အမျိုးသမီးဟာ ဒေါက်တာထွန်းအောင်၏ သမီးဖြစ်ပြီး၊ ဒေါက်တာထွန်းအောင်ဟာ အယ်လ်ကိုင်ဒါးများ နဲ့ပတ်သက်မှုကြောင့် ထောင်ခဏခဏကျဖူးသူ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ ဒေါက်တာထွန်းအောင်ဟာ ဒီအဓိကရုဏ်းကို ဖန်တီးခဲ့သူ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ လေဆိပ်လုံခြုံရေး ဝန်ထမ်းတွေက သူမကို ချက်ချင်း စစ်တွေပြည်နယ်ရုံးကို ပို့လိုက်ကြပါတယ်။ အခုဆိုရင် ပြည်နယ်ရုံးမှာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် ရုံးထိုင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ သောင်းကျန်းသူ ကုလားများဝင်ရောက်ခဲ့တာဟာ အင်အား(၁၈၀)ရှိ တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၊ အင်အား(၂၀၀)ရှိတပ်ဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ ပေါင်းနှစ်ဖွဲ့ ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁၀-၆-၂၀၁၂)ရက်နေ့ မွန်းတည့် ၁၂း၀၀-နာရီခန့်မှာ ကုလားတန်မြစ်ကန်းကို အပြာရောင်စက်လှေတစ်စင်း ဆိုက်ကပ်လာရာ ဒေသခံရခိုင်များက သတင်းပို့လို့ ရဲနဲ့စစ်တပ်က လိုက်လာသောကြောင့် စက်လှေထွက်ပြေးသွားကြောင်း၊ လက်နက်ကိုင် အယ်လ်ကိုင်ဒါးများ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဓာတ်ပုံတော့ ရလိုက်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ (၁၀-၆-၂၀၁၂)ရက်နေ့ မနက်ခင်းမှာ ဒေါ့မြိုင်ကုလားရွာမှာ ရခိုင်တစ်ယောက် အသတ်ခံခဲ့ရကြောင်း၊ ၎င်းရွာ၌ ကပ်နေတဲ့ မင်းဂံ အကွက် ၈/၉-ကို ကုလားတွေက မီးရှို့လို့ မီးခိုးမွှန်နေချိန်မှာ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီး သတ်ပစ်ကြတာ ဖြစ်ကြောင်း၊ အလောင်းသွားကောက်တော့ ခြေထောက်တစ်ချောင်းနဲ့ ဦးခေါင်းပဲ ရတော့ကြောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာကုလားများက လူသားစားပစ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အခင်းစဖြစ်သည့် ၈-၆-၂၀၁၂-ရက်နေ့တုန်းကလည်း အတီးအမှုတ်တွေနဲ့ ကခုန်ပြီး အသေဖမ်းမိခဲ့သော ရခိုင်အလောင်းကို စားရင်း အောင်ပွဲခံခဲ့ကြောင်းလည်း RNW-ကပြောပါတယ်။ လက်ပ်တော့ပ်ပါ အချက်အလက်များအရ အယ်ကိုင်ဒါးနဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီများကို ထိရောက်ပြင်းထန် တိကျစွာ အရေးယူပြီး၊ ၎င်းတို့နဲ့ ဆက်စပ်သူများကိုလည်း ပြည်သူ့အားကိုယူကာ အမြန်ဖော်ထုတ်နိုင်ပါမှ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေး၊ မြန်မာပြည်အရေး… ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ အတွက် အများပြည်သူများ စိတ်အေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အခွင့်ရေးကို ဗန်းပြပြီး တိုင်းပြည်ကို ရောင်းစားနေတဲ့ လောက်ကောင်များနှင့် ဧရာမမေတ္တာရှင် UNHCR-နဲ့ UNHR-ဆိုသူကြီးများဟာ သမိုင်းရဲ့တရားခံကြီးများဆိုတာ ပေါ်လွင်သွားခဲ့ပါပြီ။ နောက်ဆုံး သတင်းအရ ရိုဟင်ဂျာကုလားတွေဟာ နာဇီဈေးကို မီးကွင်းတွေ ပစ်ပြီး မီးရှို့ဖျက်ဆီးကြပါတယ်။ တစ်ဈေးလုံး မီးလောင်သွားခဲ့ကြောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာကုလားများ ဆန်ပြတ်နေလို့ ဆန်တန်းကို ဝင်စီးခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
(RNW-၏ သတင်းပေးပို့ချက် ဖြစ်ပါသည်။) ဦးပဉ္စင်း ဝီရသူ(မစိုးရိမ်) ဘဒ္ဒန္တဝိစိတ္တာဘိဝံသ
ဓမ္မသဟာယကျောင်း မစိုးရိမ်တိုက်သစ် မန္တလေး။
The voices ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၁၁
အယ်လ်ကေဒါနှင့် ဆက်သွယ်သော ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကို သက်ဆိုင်ရာက ဖမ်းဆီးဟူသည့် သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိစစ်ဆဲဖြစ်ကြောင်း လက်ရှိအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း အချက်အလက်များ ခိုင်မာပြည့်စုံသည်နှင့် တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ၎င်း၏ Facebook စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ည ၉နာရီ ၁၅ ၊ ဇွန် ၁၁၊ ၂၀၂၁၊ YPI
သက်ဆိုင်ရာကို တင်ပြမယ်ပြောတော့ ကျွန်တော် ခင်ဗျားတို့ဆီက ပိုက်ဆံမတောင်းဘူးတဲ့
Hteik Tin Aung
နိုင်ငံတော်အခြေအနေကြောင့် စိတ်ပူပြီး ပိုက်ဆံ အကုန်ခံ အင်တာနက်ကနေ သတင်းစောင့်ကြည်နေတုံး မြောက်ဥက္ကလာ စခန်းမှူးက ၇နာရီကျော်ကျော်ခေါ်တာနဲ့ သွားလိုက်ရတယ်။ ပြောတာကတော့ မနက်ဖြန် ဥပဒေအရာရှိနဲ့ သွားတွေ့ဖို့၊ ၁၃ရက်နေ့ အမှုတင်ဖို့အတွက် ဥပဒေအကြံပေးထံက အမြန်ရဖို့၊ ၁၃ရက်နေ့ တရားရုံးတင်ရင် တရားခံများကို သယ်ဆောင်ဖို့ ကားငှားရမှာမို့ ပေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိမရှိ ခေါ်မေးတာဖြစ်နေတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဒီလိုမျိုး အသတ်ခံရသူဘက်ကို ဘယ်လောက်များ ဒီလိုမျိုးပြောထားကြပါလိမ့်။ သက်ဆိုင်ရာကို တင်ပြမယ်ပြောတော့ ကျွန်တော် ခင်ဗျားတို့ဆီက ပိုက်ဆံမတောင်းဘူးတဲ့ . . . ကဲ အသေးစိတ်သိလိုသူများအတွက် အသံဖိုင် နောက်ရက်လာမည် မျှော် . . .
နိုင်ငံ့အရေး ရတက်မအေး အမှုဖြစ်စဉ်ကိုတောင် မေးသမျှ မဖြေခဲ့သမျှ အသေးစိတ်သိလိုသော စာနယ်ဇင်းများ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမည်။
ရှယ်ပေးပါမယ်။ yeyintnge.com မှာလည်းတင်ပေးပါမယ်။
ပို့စေချင်တဲ့မီဒီယာတွေကိုပို့ ပေးဖို့လည်း အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု
အရေး ပေါ် အခြေအနေကြေငြာ ပြီးနောက် ရခိုင် ပြည်နယ် တွ...
အင်္ဂလန်ရောက် ဘင်္ဂလီတွေ လာမဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ လန်ဒန် မြ...
ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကို သက်ဆိုင်ရာက ယနေ့တွင...
သက်ဆိုင်ရာကို တင်ပြမယ်ပြောတော့ ကျွန်တော် ခင်ဗျားတိ...